NK | प्रहरीको रासन भत्ता,बढ्यो कुन जिल्लामा कति बढ्यो ?
प्रहरीको रासन भत्ता,बढ्यो कुन जिल्लामा कति बढ्यो ?
काठमाडौं । पाँच वर्षपछि नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता बढ्ने भएको छ ।सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी बढेको रासनभत्ता दिन लागेको हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रहरीको रासनभत्तामा चार अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ । ‘साउनदेखि नयाँ दरअनुसार प्रहरीले रासनभत्ता पाउनेछन्,’ प्रहरीको बजेट महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले भन्नुभयो, ‘बजेट आइसकेको छ, नयाँ दर स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’
नेपाल प्रहरीलाई ०७५ मा तय भएको दरअनुसार रासनभत्ता दिइनेछ । नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता हरेक जिल्लामा फरक–फरक छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने एक समितिले मूल्यवृद्धिअनुसार हरेक वर्ष भत्ताको दर परिमार्जन गर्दछ । तर, ०७१ सालयता रासनभत्ता मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन हुन सकेको थिएन । बढेको भत्ता पाउनुपर्ने प्रहरीले माग गर्दै आएको थियो । राशन वृद्धि भएपछि प्रहरीको मनोबल बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तीन वर्षअघि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वीरबहादुर बुढा नेतृत्वको समितिले दुई–दुई वर्षमा रासनभत्ता समायोजन गर्न सुझाब दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार प्रहरीको रासत भत्ता बढाइएको हो ।
उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले साउनदेखि दैनिक एक सय ९४ रुपैयाँ २९ पैसा रासनभत्ता पाउनेछन् । हाल उनीहरूले एक सय ७५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, झापामा कार्यरत प्रहरीले एक सय ५७ रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा एक सय ७९ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा इलाममा एक सय ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएकामा दुई सय रुपैयाँ पाउनेछन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा कार्यरत प्रहरीले चार सय ४४ रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । उनीहरूको रासनभत्ता बढेर अब ६ सय १५ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले रासनको दर पनि उच्च रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा रासनभत्ता बढ्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्योल छ । सशस्त्रलाई पुरानै रेटअनुसारको मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । रासनभत्ता सममामयिक बनाउन प्रस्ताव गरिएको, तर त्यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको रासनभत्ता वृद्धिबारे पनि कुनै निर्णय भएको छैन।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुसभित्रै संचालन,यी हुन सरकारले गरिरहेका काम
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस महिनाभित्रै संचालनमा आउने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले दिदैं उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याईएको बताए।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको बताएका हुन्। पर्यटन पूर्वधार अन्तरगत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । धावनमार्गको पुनःनिमार्ण जुन महिना भित्रै सकिने बताए । त्यस्तै गौतम बुद्ध विमान स्थलमा रनवयको काम सकिएको भन्दै पुस भित्र ट्रमिनल भवन निमार्ण गरि अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि सरकारले ध्यान दिएको उल्लेख गरे । पोखरा विमान स्थल २ वर्षमा निमार्ण कार्य सक्नेगरि अघि बढेको बताए ।
‘निजगढ विमान स्थलको हकमा लगानी सम्मेलनमा लगानी कर्ताहरुको इच्छा भएको छ । त्यसको प्रारम्भिक मुल्याङ्कन हुँदै छ । सार्वजानिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुने गरि अगाडि बढेको छ’, उनले भने ‘आन्तरिक विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति भैरहेको छ भने कतिपयको संभाव्यता अध्ययन भैरहेको छ ।’
निर्माणाधीन आन्तरिक हवाई मैदानहरु, नेपाली ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सेवा विस्तार, हिमाली सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि पनि बजेटले विषय उठान गरिएको उनले बताए।
हवाई सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले समावेश गरेको छ।
हाम्रा राडारहरुका क्षमता विस्तार, युरोपेली संघको कालोसूचीमा रहेको नेपालको हवाई क्षेत्र लाई सुधार गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता विस्तारका लागि जोड दिइएको छ।